I-Helgoland nguCarlo Rovelli
Inselele yesayensi akukhona nje ukuthola noma ukuphakamisa izixazululo zayo yonke into. Indaba futhi imayelana nokunikeza ulwazi emhlabeni. Ukudalula kuyadingeka njengoba kuba nzima lapho izimpikiswano zethulwa ekujuleni kwesiyalo ngasinye. Kodwa njengoba indoda ehlakaniphile yasho, singabantu futhi akukho lutho...
I-Runaway Kind ka-Anthony Brandt
Sihlolisisa imfihlo enkulu yokuziphendukela kwemvelo komuntu, i-prodigy eyayiyiqiniso elihlukile. Asikhulumi kakhulu ngezobuhlakani kodwa sikhuluma ngokudala. Ngobuhlakani, i-proto-man yayingaqonda ukuthi wawuyini umlilo emiphumeleni yokusondela kuwo. Sibonga ubuhlakani...